Matio 11 - Ny Baiboly
Matio toko 11
Ny nanirahan'i Joany olona ho any amin'i Jesoa - Ny nideràn'i Jesoa an'i Joany - Faniniana ny tsy mibebaka.
1Ary rahefa tapitra ny fampianarana nomen'i Jesoa an'ireo mpianany roa ambin'ny folo lahy ireo, dia niala tao izy, ka nandeha nampianatra sy nitory teny tamin'ny tanàna manodidina rehetra. 2Ary nony ren'i Joany tao an-tranomaizina ny nataon'ny Kristy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy 3hanao aminy hoe: Hianao va no Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? 4Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Mandehana ka lazao amin'i Joany izao zavatra renareo sy hitanareo izao: 5mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, torina amin'ny malahelo ny Evanjely, 6ary sambatra izay tsy tafintohina noho ny amiko.
7Nony lasa ireo, dia nilaza an'i Joany tamin'ny vahoaka Jesoa, nanao hoe: Hizaha inona no nalehanareo tany an'efitra? Volotara hetsiketsehin'ny rivotra va? 8Sa hizaha inona no nalehanareo tany? Lehilahy tsara fitafiana va? Indro any amin'ny tranon'ny mpanjaka izay tsara fitafiana. 9Sa hizaha inona àry no nalehanareo tany? Moa mpaminany va? Eny! hoy izaho aminareo, ary ambony noho ny mpaminany aza, 10fa izy no ilay voasoratra hoe: Indro aho maniraka ny anjeliko hialoha anao sy hamboatra ny làlanao. 11Lazaiko aminareo marina tokoa fa amin'izay natera-behivavy mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe noho Joany Batista; kanefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra no lehibe noho izy. 12Ary hatramin'ny andron'i Joany Batista no ho mankaty, dia azo an-keriny ny fanjakan'ny lanitra, ka ny mpanao an-keriny no mahazo azy. 13Fa ny Mpaminany rehetra sy ny Lalàna dia naminany hatramin'i Joany, 14ary raha mety mino hianareo, dia izy no ilay Elia ho avy. 15Izay manan-tsofina hihainoana aoka hihaino.
16Amin'inona no hanoharako ity taranaka ity? Amin'ny ankizy madinika mipetraka eny an-kianja, izay miantso ny namany, 17ka manao hoe: Nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy hianareo; nanao hira mampalahelo izahay, nefa tsy nandon-tratra hianareo. 18Fa tonga Joany, tsy nihinana tsy nisotro, nataon'ny olona hoe: Azon'ny demony izy. 19Tonga indray ny Zanak'olona, mihinana sy misotro, lazain'ny olona hoe: Lehilahy lian-kanina io, sady mpisotro divay sy sakaizan'ny poblikàna mbamin'ny olon-dratsy fiaina rehetra. Fa efa nohamarinin'ny zanany ny Fahendrena.
20Ary tamin'izay, dia nanomboka niteny mafy ireo tanàna nanaovany fahagagana maro izy, satria tsy nibebaka ireo, 21ka nataony hoe: Loza ho anao, ry Korozaina, loza ho anao, ry Betsaida! fa raha izay no tany Tira sy Sidòna no natao ny fahagagana natao taminareo, dia efa ho nibebaka ela tamin'ny akanjo malailay sy tamin'ny lavenona izy. 22Koa lazaiko aminareo, fa amin'ny andron'ny fitsarana, dia ho moramora kokoa ny hatao amin'i Tira sy Sidòna noho ny hatao aminareo. 23Ary hianao, ry Kafarnaoma, hasandratra hatrany an-danitra va hianao? Hietry hatrany amin'ny afobe hianao, fa raha tany Sodoma no natao ny fahagagana natao tao aminao, dia mbola ho nitsangan-ko tanàna mandraka androany izy. 24Koa dia lazaiko aminao fa ho moramora kokoa ny hatao amin'i Sodoma amin'ny andron'ny fitsarana noho ny hatao aminao.
25Tamin'izany andro izany, dia hoy indray Jesoa: Misaotra anao aho, Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin'ny hendry sy be saina hianao, ary nanambara azy tamin'ny tso-po kosa. 26Eny, misaotra aho, Raiko, fa izany no sitra-ponao. 27Efa nomen'ny Raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny zanaka sy izay tian'ny Zanaka hanehoana azy. 28Mankanesa atý amiko hianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo aho. 29Ento ny jiogako, ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, dia hahita fiadanana ho an'ny fanahinareo hianareo; 30fa mora entina ny jiogako, ary maivana ny entako. >